XIKOO Profaịlụ | XIKOO Industrial Co., Ltd.
Site ihe karịrị 13years ọhụrụ ngwaahịa na-emepe emepe na ochie ụdị upgrading, e nwere ihe karịrị 20 iche iche nke ụdị maka dị iche iche ngwa. XIKOO isi ngwaahịa gụnyere obere oyi ikuku, ulo oru ikuku oyi, window ikuku oyi, centrifugal ikuku oyi, anyanwụ DC ikuku oyi na ikuku oyi akụkụ. ọtụtụ-eji maka n'ụlọ, ụlọ ọrụ, na-echekwa, ụlọ ọgwụ, ụgbọ, tent, griin haus, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ogbako, nkwakọba na ebe ndị ọzọ.
XIKOO nwere nlezianya nlezianya nke ngwaahịa na nyocha na usoro mmepụta ọ bụla. Site na nhọrọ ihe onwunwe, imepụta teknụzụ, mmepụta, ngwugwu na nnwale. Ikuku oyi e mma site OA, SASO, RoHS, IEC wdg Ma anyị ngwaahịa na-ghọtara site ahịa anyị, anyị mgbe niile ahịa na-afọ na ogologo oge imekọ ihe ọnụ na anyị.
XIKOO ụlọ ọrụ ntanetị na-ekpuchi mpaghara 21 na mpaghara 86 mepere emepe, karịa ndị mgbasa ozi 112 na mba niile. Na ngwaahịa na-ere 35 esenidụt mba na mpaghara. Karịsịa ịzụlite ogologo oge nkwado ndị ahịa na Saudi Arabic, Kuwait, Mali, Morocco, Sudan, Vietnam, Malaysia, Thailand, USA, Brazil, Germany, Australia na mba ndị ọzọ.
XIKOO Nọgidenụ na-eme nnyocha na ọhụrụ, merie elu tech enterprise, elu tech ngwaahịa na ndị ọzọ na ukpono. Nweta ọtụtụ patent patent, mepụtara patent na patent bara uru. Air oyi ofufe bụ obere oriri na gburugburu ebe obibi enyi na enyi ngwaahịa, XIKOO mepụtara ọhụrụ ume isi iyi anyanwụ DC evaporative ikuku oyi. anyị na-atụ na-eme ka anyị na ụwa ike ịzọpụta na enyi na enyi na gburugburu ebe obibi na-ewu site XIKOO ikuku oyi nkwalite na ngwa.
XKIOO nyekwara otutu ego ma rụọ ọrụ na mmepe ngwaahịa ọhụụ n'afọ ndị gara aga. N'ọdịnihu, anyị ga-eweta ngwaahịa ọhụrụ maka ndị ahịa anyị, Nnabata iji kwado XIKOO, Nabata ezigbo echiche gị ma zụlite ngwaahịa ọhụrụ na XIKOO.